Kolombia: manavotra takalon’aina 4 nalain’ny FARC an-keriny tamin’ny 1998 ny Tafika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2010 5:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Français, English
Tamin'ny alahady 13 Jona tamin'ny mitataovovonana, raha niomana ny hijery ny lalao fiadiana tompon-daka erantany amin'ny baolina kitra ifanandrinan'i Alemana sy Aostralia ny ankamaroan'ireo Kolombiana, nivoaka ny vaovao: minitra vitsy vao haingana, nambaran’ny Filoha Uribe ny fanavotana ny Jeneraly Luis Mendieta sy ny Kolonely Enrique Murillo, Manamboninahitra ao amin'ny Polisim-pirenen'i Kolombia nalain'ny FARC an-keriny tamin'ny 1 Novambra 1998 nandritra ny fahirano tao Mitú [es] tany Amazonia, tany amin'ny departemanta atsimo atsinanan'i Vaupés. Ora maromaro taorian'izay, nanamafy ireo mpitandro filaminana fa avotra koa i Arbey Delgado Argote “Sergent”-n'ny tafika (nalaina an-keriny ny 3 Aogositra 1998 tany Miraflores any Guaviare) ary tafatsoaka ny Kolonely William Donato (nalaina an-keriny niaraka tamin'i Delgado). Tamin'ny Alatsinainy maraina dia hitan'ny Tafika soa aman-tsara i Donato (nampiakarina grady avokoa ireo voaavotra rehetra taorian'ny fanekena ny lalàna tany amin'ny Kongresy [es] tamin'ny 2008). Ny fanavotana, izay natao tany Calamar any Guaviare, dia nantsoina hoe fakàna tahaka ny Operation Camaleón nataon'ny Ministery ny Fiarovana Gabriel Silva. Tamin'ny 2008, ny Operation Jaque dia nanavotra an'i Íngrid Betancourt sy takalon'aina 14 hafa.
Diaben'ny vahoaka miaraka amin'ny soratra hoe “henatra ho an'ity firenena ity ny FARC sy ireo takalon'ainy” tamin'ny 20 Jolay 2008. Sarin'ny mpampiasa Flickr pattoncito, arovan'ny lalàna Creative Commons.
Raha niparitaka ny vaovao, naneho hevitra momba izany ireo Kolombiana mpampiasa Twitter – no sady manao fanamby amin'ny lalao Fiadiana Tompon-daka erantany. Ny ankamaroan'izy ireo faly [es], ny sasany toa miahiahy [es] ny amin'ny rindran-damin'ity “opération” ity, herinandro mialohan'ny fihodinana voalohan'ny fifidianana filoham-pirenena ifanandrinan'i Juan Manuel Santos (Minisitry ny Fiarovana teo aloha) sy Antanas Mockus.
Misaotra anao @AlvaroUribeVel tamin'ny fampisehoana an'i Farc sy ny namany fa manafika azy ireo an-kery mandrapahatongan'ny andro farany amin'ny fe-potoanao ianao
Tsy mino aho hoe misy olona tokony ho faly nefa miteny zavatra tsy misy dikany toy izany
Tsy tokony hanaloka ny famotopotorantsika ny hafaliana noho ny fanavotana sy ny asa mendri-piderana nataon'ny Tafika.
Tsy ijerena na malala-tsaina ianao, na mpifikitra amin'ny nentin-drazana, na uribista, na maitso, na mpanohana ny antoko PIN. Efa olona iray afaka tsy ho takalon'aina aloha izany
Baolina maty tsara indrindra tamin'ny fiadiana ny tompon-daka erantany #worldcup, matin'ny #Tafika raha namonjy an'i #Mendieta sy #Murillo #PiedadCórdoba nalain'ny #FARC ho #takalon'aina http://bit.ly/9bp4n5
@simonwilchesc (1, 2):
Raha misy ny tsy fitoviana tena mazava eo amin'ny Governemanta sy ny Fanjakàna, tsy ho niteraka fihetsika mifangaro sy miahiahy teo amin'ny vahoaka ny [fanavotana ny] Mendieta. Ary naleon'ity fitondràna ity nijery manokana ireo olon-tokana toy izay ny vahoaka. Rariny raha misy izany ahiahy izany. Aza jamba azy aza mitaraina.
Am-pahatsoram-po no hilazako fa mino fahitsiam-pon'ny vahoaka aho. Aza mety ho v***ndreniny, raha afaka mamonjy azy rehetra ny Uribe dia ataony izany.
Ho ela velona Colombia, letie, ho ela velona ny Tafiky maherin'ny firenentsika !!! Enga anie ka tsy hitsara azy ireo ny “Fitsaràna avo” afaka 20 taona.
Raha misy ny “positive diso“, any amin'i Uribe ny tsiny. Raha misy ny tetika mahomby manohitra ny fandravàna, fanararaotan'i Uribe izany. Lojikan'ny ‘bemokony’.
Faly tokoa ny foko noho ny fanavotana ireo takalon'aina, nefa tsy nahafantatra aho fa hoe azo atao ny tatitra mivantana amin'ny haino aman-jery rehefa misy fanavotana ataon'ny tafika
Mila fikirizana lehibe vao afaka mankahala izay fahombiazan'i Uribe. Mahagaga ahy ianareo.
Mampalahelo amiko fa ireo [takalon'aina] tena malza ihany no avotan-dry zareo. Dia ahoana ny hafa?
Tsy misy fotony ny fitenenana fa misy resaka ambadika momba ny fifidianana iny fanavotana iny. Mbola lehibe lavitra ny risika mety tsy nahombiazan'ny tetika.
Raha mila mifidy lafiny iray ve isika tsy ireo takalon'aina no iarahana?
Ny tena mahatsikaiky dia ry zareo manameloka ny olona tsy faly satria hoe nisy takalon'aina iray avotra.
Ireny olona tezitra noho ny fanavotana ireny dia satria mino izy ireo fa fanohanana ny kandidàn'ny governemanta izany, ka tsaratsara kokoa raha tazoniny ho azy irery izany
Fifandroritan-kevitra sy hatsaram-panahy hafa: ratsy ny tatitra mivantana tamin'i namotsorana an'i Moncayo. Tsara be izao nony i Mendieta no navotana. Izany tokoa ve?
Tamin'ny alatsinainy maraina, nentina tany Bogotá ireo takalon'aina avotra mba hihaona amin'ireo fianakaviany sy hanao fizahàna ara-pahasalamana. Ireo mpampiasa Twitter sasany dia nitsikera ny fomba nanaovan'ireo mpanao gazety tatitra sy ny fitondran-tenan'izy ireo tamin'ny nahatongavan'ireo takalon'aina avotra sy ny famoriana mpanao gazety [es] taorian'izay, ary koa ny hoe ankoatran'i Mendieta dia mbola voatàna any ireo takalon'aina taloha:
Ary ireny horonantsary avoakan'ny fahitalavitra ireny, vatom-pifidianana firy no ho entin'ireny? Tsy azony fafàna ve ireny sa tetika hafa ataon'ny [mpanolotsaina ara-pifadraisana Venezoeliana’] JJ [Rendón] izany?
Nanomboka tany Catam [seranam-piaramanidin'ny tafika] ny tatitra mivantana, tsaroako tsara mihitsy tamin-dry zareo niteny hoe mahatsikaiky ny fanalàna ny rojon'i Moncayo
Toa raha ny fanirian'ireo mpanao gazety sy mpaka sary sasany dia tsy teo ireo fianakaviana fa manelingelina azy ireo
Tokony ho manam-pahaizana amin'ny famoriana mpanao gazety miaraka amin'ny takalon'aina isika. Nefa tsy izany no izy.
Tena ilaina ho ana tati-baovao ve iny feon-kira mampihoron-koditra iny? Tsara raha ny fijoroana vavolombelona no nalefan-dry zareo fa tsy ny feon-kira
Nanana tsofa [es] ho an'ny fanavotana [ny tafika], nefa tsy manana tsofa na tandramokotra hamahàna ireo rojon-dry zareo? #freedom
Tamin'izaho nanana vahiny Amerikana no nisy fanavotana [takalon'aina] farany. Androany Josh nanontany ahy ny momba izao fihetsiketsehana rehetra izao…
Tsy misy idiran'ny fironana ara-politika ny fahalalahan'ireny Kolombiana ireny, samy manameloka ny FARC avokoa isika, mitovy isika amin'izay
Niaraka tamin'ny fanaovatana an'ireo takalon'aina efatra ireo, miaramila sy polisy 17 no mbola voatazon'ny FARC [es], izay nitetika ny hanakalo azy ireo an'ireo mpanao ady anaty akata voafonja; misy ihany koa takalon'aina an-jatony tsy fantatra anarana [es] any Kolombia.
1 andro izayNikaragoa